maitiro ekumisikidza qa basa kubva pakutanga
Kuru Agile Maitiro Ekumisikidza iyo QA Basa Kubva Kubva
Maitiro Ekumisikidza iyo QA Basa Kubva Kubva
Icho chiitiko chinowanzoitika: kambani yekutanga ine pfungwa nyowani uye inoshandira vanoverengeka vavaki kuti vavake inoshanda modhi yezano.
Nekuda kwehunhu hwekutangisa, kureva kuti, kwete mari yakawanda inowanika nechinguva chidiki chenguva yekuvandudza iyo pfungwa, kuedza kukuru kunoitirwa kuvaka chigadzirwa chitsva kuti chibudise kuruzhinji kuti vaedze mvura, uye nekudaro zvakasikwa, kuyedza uye QA haisiyo inonyanya kukoshesa timu yekusimudzira.
Mushure mekuonekwa kwekuti zano rave kubudirira, kambani inoda kuwedzera pane pfungwa uye kutanga kutora vamwe vanogadzira, asi panguva imwe chete, ivo vanodawo kuti chigadzirwa chiongororwe chisati chaenda kuruzhinji.
Kwechinguva, kuyedzwa kunoitwa nechero munhu anowanikwa mukambani, uye inonyanya kuita ad-hoc isina maitiro akakodzera ekutevera.
Zvino panouya poindi apo iyo yekutanga kambani inosarudza kuhaya munhu wavo wekutanga mukuru QA munhu kuti atange kuita nyowani QA maitiro echikwata chekuvandudza.
Nechinangwa chechinyorwa chino, ini ndichaenda kufunga kuti kutanga ikambani inoenderana newebhu, i.e. e-commerce webhusaiti.
Kuteedzera QA Maitiro
Chinangwa chikuru chekuva neQuality Assurance maitiro ndeyekuona kuti chigadzirwa chakakodzera chakavakwa mushe, kekutanga. Izvi zvinoreva, isu tinofanirwa kuona kuti izvo zvinodiwa zvinotsanangurwa nenzira kwayo uye timu yekusimudzira ine nzwisiso yakasimba yekushanda kwezvinhu zvitsva usati watanga kodhi.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kuyedza haisi chikamu, ibasa uye kuti kuyedza kunotanga kubva pakutanga chaiko kwenzira yekusimudzira, kubva kubva pakanyorwa nyaya dzevashandisi.
Kuedzwa kunofanirwa kutsigira kuvandudzwa uye nekudaro zviitiko zvekuyedza zvinowirirana nezviitiko zvekuvandudza, uye padanho rega rekuvandudza isu tinofanirwa kuona kuti kodhi yakanyatso kuyedzwa.
Tisati taita yekuyedza, isu tinofanirwa kuziva yazvino nzira yekuvandudza uye maitiro uye kana zvichidikanwa gadzirisa zvigadziriso.
Kuzvidzora Kuedzwa / Kuedzwa kweSprint
Sezvo iwe paunotanga seyekutanga QA munhu mukambani, mikana ndeyekuti hapana kudzokororwa kuyedzwa munzvimbo uye nekudaro sezvo maficha nyowani achigadziriswa, iwe hauna zano kana ivo vachikanganisa zvakashata zviripo webhusaiti yazvino. Zvakare, iwe unofanirwa kufambidzana neboka rekusimudzira kuti uedze izvo zvitsva zvinhu kuti uone kuti vanoshanda nemazvo uye zvinoenderana nezvinotsanangurwa.
Pane angangoita maviri mabasa akafanana: Kuedzwa kwenyaya nyowani muprint uye kuita imwe nhanho yekudzokorora kuyedza.
Kuedzwa kwezvinhu zvitsva kunotora pekutanga sezvo paine mukana wakawanda wekutsvaga mabugs mune kodhi nyowani pane kutyora iriko rinoshanda saiti. Asi, panguva imwecheteyo, Kuongororwa kweRegression kunodiwa kuti uve nechokwadi chekuti iko kushanda kuri kuramba kuchishanda sezvo isu tichivaka maficha matsva.
Rudzi rwekuongorora rongedza rinofanirwa kuurayiwa nekukurumidza kana paine kuvandudzwa kuchikumbiro, saka timu yekusimudzira inogona kuwana kutsanya mhinduro pane hutano hwekushandisa.
Iko hakuna kukwana nguva yekunyora kudzoreredza bvunzo pamwe nekuenderana pamwe nekuyedzwa kwezvinhu zvitsva. Tingaite sei kuti tityore iyi kutenderera?
Kazhinji, mukati memazuva mashoma ekutanga esprint, vagadziri vari mushishi kukodha uye saka izvo zvitsva zvinhu hazvizove zvakagadzirira kuyedza kwechinguva. Heano mukana wakanaka wekutanga kushanda pamiedzo yekudzokorora.
Kune akanakisa maitiro ekudzokororazve kuyedza, asi kazhinji, nzira yacho ingave yekuziva main core mushandisi nzendo muwebhusaiti, kuitira kuti pane yega yega kuburitswa kwewebhu webhusaiti, tinogona kuva nechivimbo chekuti kunyorera kuchiri kushandiswa neruzhinji rweayo vashandisi.
Iko hakudi kuve neinopedzisa rondedzero yezviitiko izvi, chete makuru uye akakosha iwo anozokwana kutanga diki regression pack iyo inogona kuitiswa pane yega kuvaka. Gare gare, sezvo regression pack ichikura, isu tinokwanisa kutanga kuwedzera zvimwe zviitiko.
Chikurukuru, aya mamiriro ekudzoreredza anofanirwa kuve anoitwa.
Mune chirongwa chinogumbuka, uko sprint inowanzo sviko svondo mbiri, hapana nguva yakakwana yekuita kuyedzwa kwese nemaoko. Iko kuyedzwa kwenyaya nyowani pamwe nekudzoreredza kuyedzwa. Kunyangwe zviine musoro kuita ongororo kuyedza kuyedza maficha nyowani, kudzokorodza bvunzo kunofanirwa kuve otomatiki kudzikisira iro remazuva ese basa rekudzokororazve iwo mabvunzo akafanana nemaoko.
Kuendesa / Kuvaka Mapaipi
Kuendesa kana kuvaka pombi mune yakasarudzika projekiti inotsanangura kuti nyaya inowana sei kubva pachigadzirwa backlog kuti irarame saiti yekugadzira. Iyo inotsanangura maitiro uye zviitiko zvinoitika padanho rega rega.
Kuti tiite yakabudirira QA maitiro anoona kuti tiri kugara tichisunungura mhando kodhi, iyo yekuendesa pombi inofanirwa kutsanangurwa uye kutevedzwa kune vese vane chekuita. Iyo pombi yekuendesa ndiyo musana wekuendesa software.
Iyo pombi inofanira kuve yakavakirwa pane akanakisa maitiro uye inosanganisira zviitiko zvinoitika padanho rega rega.
Chimwe chezviitiko zvakakosha kwazvo muchirongwa cheakagwinya kazhinji kacho nyaya dzemusangano wenyaya. Apa ndipo apo muridzi wechigadzirwa, vanogadzira uye vanoedza vanoungana mukamuri uye vanotanga kujekesa uye kupa nyama ruzivo rweiyo nyaya. Izvi zvakakosha nekuti munhu wese anofanirwa kuve nekunzwisisa kwakafanana kwenyaya asati atanga basa rekuvandudza.
Quality Assurance iri pamusoro pekudzivirira kuremara pane kuona uye nekudaro mumisangano yenyaya, timu inowana mukana wekubvunza mibvunzo nezve ruzivo rweiyo nyaya, chero hunyanzvi hwekugadzira kana dhizaini uye chero anovharira ekuvandudza nyaya.
Heano mukana wakanaka wekutanga kunyora kunze nzira yekugamuchirwa yenyaya. Wese munhu anofanirwa kupa uye otanga kufunga nezve zvingangoitika munyaya imwe neimwe, sezvo yega yega ichinge iine zano rakasiyana, saka kana misoro iri pamusoro penyaya, zvinoitika zvakawanda zvinogona kufungwa nezvazvo uye mukana wepamusoro wekudzivirira zvikanganiso kuti zvirarame.
Kana munhu wese achinge ave nechokwadi pane zvakadzama uye chiyero chenyaya imwe neimwe, kusimudzira kunotanga.
Mushambadzi Kuedza / Kuyedza Panguva Yekusimudzira
Wese munhu anofanira kuve nebasa rehunhu hwechigadzirwa uye kwete kungoedza chete. Saka nekudaro, panofanirwa kuve nehuwandu hwakakwana hwe 'kuyedza kwekuvandudza' kuona kuti kodhi yakanyorwa ndeyemhando yepamusoro isati yaendeswa kunzvimbo yekuyedza kuti iwedzere kuyedzwa.
Zvirokwazvo chidimbu chega chega chekushanda chinofanira kunge chakayedzwa zvakanaka. Pamusoro peizvozvo, panofanirwa kuve nemiedzo yekubatanidza, bvunzo dzeAPI pamwe neUI bvunzo.
Peer kodhi yekuongorora kana 'shamwari yekuyedza' inogona kuisa ziso rechipiri pane iro basa remugadziri. Muedzo anogona kubatsira mukuongorora zviyero zveyuniti uye pamwe nemiedzo yeAPI kuona kuti bvunzo dzechokwadi dzakanyorwa, pamwe nekubatsira kunyora iyo yepamusoro-chikamu otomatiki maUI bvunzo.
Kuenderera mberi Kusanganisa / Kwayedza Nharaunda
Kuti tiongorore zvinobudirira maficha, tinofanirwa kuona kuti kodhi inoshanda kwete chete pamushini wemugadziri asiwo kune dzimwe nharaunda, uye inosanganiswa neimwe kodhi yemusunguri.
Kuenderera mberi kusanganiswa kunobatsira kuona chero matambudziko ekuvaka pakutanga mukuita, kuitira kuti kana kutumirwa kukundikana titange kutarisa kuti nyaya irikubva kupi.
Mamiriro Ekuyedza anopa vanoedza uye dzimwe nhengo dzechikwata mukana wekuyedza izvo zvitsva vasati vaenda kunorarama.
Kana zvichidikanwa, isu tinofanirwa zvakare kuita isiri-inoshanda kuyedza, senge kuita, kuita uye kuchengetedza kuchengetedzwa. Kazhinji tarisiro iri pakuona mashandiro acho achishanda nemazvo, zvisinei kuyedza kusiri-kunoshanda kunofanirwa kupihwa kukoshesa kumwechete, kunyanya kwekushandisa kwewebhu sezvo ivo vachigona kuitiswa mutoro unorema uye / kana kurwiswa.
Nekuita kuyedza kusiri-kushanda, tinogona kuva nechokwadi chekuti kunyorera kwedu kunogona kubata mutoro munguva dzepamusoro uye izvo zvisina kuvhurika kutyisidziro dzekuchengetedza.
Mamwe mapoinzi ekufunga
Muchinjikwa-bhurawuza, Muchinjikwa mudziyo kuyedzwa
Nharembozha uye Hwendefa Kuedzwa
Kufanana kuuraya kwema automated bvunzo
Zvishandiso, zvakaita saJira, Jenkins, Selenium, nezvimwe…
maitiro ekuita ese maapplication kutenderera
moto e5 play saizi screen
Agile terminologies uye Tsananguro
Akanakisa Amazon Prime Day Samsung madhiri
Maitiro ekuita kuti foni yako ive nesimba
Pandora Plus inosvika paApple neIOS ine mapfumo asingagumi, isina maitiro
Samsung & apos; yekare Galaxy S6 uye S6 Edge vachiri kugashira zvigadzirwa zve software
Samsung Galaxy Note 8: mutengo uye zuva rekuburitsa paAT&T, Verizon, T-Mobile uye Sprint
Python Faira Kubata
Yakanakisa mota odhiyo maapplication eAuto Auto muna 2018: Stream mumhanzi, podcast, uye odhiyo mabhuku